🎺 संगीत | Hultsfred मा जानुहोस्
स्विडेनको सबैभन्दा प्रसिद्ध संगीत महोत्सव यहाँ जन्म भएको थियो। तर संगीत नगरपालिका Hultsfred भन्दा यो धेरै छ। संगीत घटनाहरू र उत्सवहरूको अतिरिक्त, त्यहाँ प्रदर्शनहरू, स्विडेनी रक आर्काइभ र संगीत खेल मैदान छन्। के तपाईं Hultsfred महोत्सव relive गर्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो अन्तर्क्रियात्मक पैदल Hultsfred मा - यो वाकयाई तपाईं लगभग हावाइयन चरण मा जम्मा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ फेरी फेरी फेरि। संगीत को दुनिया मा स्वागत छ!
स्वीडेनको सबैभन्दा पौराणिक संगीत महोत्सवको कथा! संगीत अभिलेखबाट कथाहरू, तस्बिरहरू र चलचित्र क्लिपहरू स्वीडिश रक आर्काइभ अब तालको छेउमा क्लासिक उत्सव भूमिमा भौतिक हिड्ने ट्रेलमा परिणत भएको छ।
"होम स्वीट हल्ट्सफ्रेड" प्रदर्शनी जसले संघ रकपार्टी र हल्ट्सफ्रेड फेस्टिवलको कथा बताउँछ। कथा पर्खाल मा छ! Rockparty र Hultsfred Festival को बारे मा प्रदर्शनी Klubben कोठा मा पाउन सकिन्छ